ရာသီအကူးအပြောင်းမှာ ဖြစ်တတ်တဲ့ ဖျားနာကိုက်ခဲခြင်းနဲ့ ကျန်းမာရေးပြဿနာများ ? - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
‘ဥတုရာသီ တောကိုမှီ’ လို့ဆိုကြသလိုပဲ..ရာသီဥတုတွေ မှန်ကန်မျှတနေဖို့ သစ်ပင်သစ်တောတွေကို မှီခိုအားထားရတယ်။ ဒီလိုပဲ .. လူ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီး ကျန်းမာပျော်ရွှင်နေဖို့ကျတော့ ‘ကံ၊ စိတ်၊ ဥတု၊ အာဟာရ’ဆိုတာတွေကို မှီခိုနေရတာပေါ့။ ရာသီဥတုပူလို့ ဖြစ်တဲ့ ကျန်းမာရေးပြဿနာတွေရှိသလို အေးလို့ ဖြစ်တာတွေလည်းရှိတယ်။
လက်ရှိရာသီဥတုလိုမျိုး နွေခေါင်ခေါင်ကနေ မိုးတွင်းကို ရုတ်တရက် အကူးအပြောင်းမှာ အပူချိန်သိသိသာသာ မကျပေမဲ့ စိုထိုင်းဆပိုမြင့်တက်လာတဲ့အတွက် ပိုနေမကောင်းဖြစ်တတ်ကြတယ်။
?ဒီလိုရာသီအကူးအပြောင်းမှာ ဘာတွေဖြစ်တတ်လဲ ??
ရာသီတုပ်ကွေးအမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Rhinovirus ကိုကာကွယ်ဖို့ လိုအပ်တဲ့ ကိုယ်ခံအားစနစ်ဟာ ရာသီဥတုအေးတဲ့အခါမှာ ပိုကျနေတတ်တဲ့ အတွက် ဖျားနာကိုက်ခဲဖို့ ပိုလွယ်ကူပါတယ်။ မိုးရေစိုလိုက် နေပူလိုက် ဖြစ်တဲ့ အခြေအနေမျိုးမှာ ပိုဖျားလွယ်ပါတယ်။ ဒီလိုအခြေအနေတွေရှောင်ဖို့လိုပါတယ်။
ဖျားလာရင် အဖျားကြောင့်ခေါင်းကိုက်တတ်သလို မဖျားဘဲ ခေါင်းကိုက်နေတာမျိုးလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
– ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ Barometric Pressure ဆိုတဲ့ လေဖိအားအပြောင်းအလဲကြောင့် ခေါင်းတစ်ခြမ်းကိုက်တဲ့ Migraine ဝေဒနာ ထကြွလာတတ်တယ်။
– Cluster Headache ဆိုတဲ့ မျက်ရည် နှာရည်တွေကျပြီး သေလုမျောပါးထိုးကိုက်တတ်တဲ့ နာတာရှည်ခေါင်းကိုက်ရောဂါတစ်မျိုးကလည်း အပူချိန်အပြောင်းအလဲဖြစ်တဲ့အခါမှာ ပြန်ဖြစ်တတ်တယ်။
– Heat headache ဆိုတဲ့ အပူရှိန်ကြောင့် ခေါင်းကိုက်တဲ့ ပြဿနာကလည်း မိုးဖွဲဖွဲလေးမဖြစ်စလောက်ရွာပြီး အပူချိန်ကျမသွားပဲ လေထုစိုထိုင်းဆပဲ မြင့်တက်သွားတဲ့ အခြေအနေမျိုးမှာ ပိုကိုက်လေ့ရှိပါတယ်။
လေဖိအား..လေထုစိုထိုင်းဆနဲ့ ပတ်ဝန်းကျင် အပူချိန်အပြောင်းအလဲတွေကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်အဆစ်အမြစ်တွေလည်း ကိုက်ခဲလာတတ်တယ်။ အထူးသဖြင့် လေထုဖိအားကျပြီး အပူချိန်ကျဆင်းလာတဲ့ အခါမှာပိုကိုက်တတ်ပါတယ်။ မိုးအေးလေ..ကိုက်လေ..ဆောင်းဝင်တော့ ပိုကိုက်လေ ဆိုတာမျိုးပေါ့။
ရာသီအကူးအပြောင်းတွေကို ကျန်းမာပျော်ရွှင်စွာဖြတ်သန်းနိုင်ဖို့အတွက် ကိုယ်ခံအားကောင်းဖို့လိုပါတယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဂရုစိုက်ဖို့လိုပါတယ်။
– ရေဓာတ်ပြည့်ဝအောင် ဖြည့်တင်းဖို့
– အာဟာရပြည့်ဝအောင် စားဖို့
တော်ရုံအဖျားအနာ အကိုက်အခဲအတွက်တော့ Paracetamol လို အိမ်သုံးဆေးဝါးတစ်ခုခုသောက်.. ပြည့်ပြည့်ဝဝအနားယူလိုက်ရင် သက်သာစေနိုင်ပါတယ်။
အဆစ်အမြစ်နာကျင်ကိုက်ခဲတာတွေအတွက် ရေနွေးအိတ်လေးကပ်ပြီး နှိပ်နယ်ပေးတာမျိုးကလည်း သက်သာစေပါတယ်။ သိပ်ဖျားရင် သိပ်ကိုက်ခဲရင်တော့ ဆရာဝန်ဆီသွားရပါမယ်။